India : Ankizy Ampolony Namoy Ny Ainy Noho Fihinana Sakafo Misy Poizina Tany An-tsekoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2013 9:21 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Swahili, Français, Italiano, বাংলা, 繁體中文, Dansk, 日本語, polski, Español, 简体中文, English
Ankizy roa amby roapolo anelanelan'ny efatra ka hatramin'ny 12 taona avy amin'ny sekolim-panjakana ambaratonga fototra ao amin'ny fanjakana Indiana ao Bihar no namoy ainy noho ny fihinanana sakafo voapoizina ny atoandron'ny 16 Jolay 2013.
Avy ao an-tanàna ambanivohitra mahantra ao Chapra ny maro amin'ireo ankizy naiditra hopitaly ary mbola ratsy dia ratsy ny fahasalaman'izy ireo. Nahiana ho nisy poizim-biby ireo sakafo.
Ity no loza ratsy indrindra tamin'ny famàhanana sakafo misy poizina any an-tsekoly. Tamin'ny loza hafa manokana tao amin'ny distrikan'i Madhubani ao Bihar ohatra, mpianatra 15 no narary avy hatrany rehefa avy nisakafo atoandro. Tao Gaya-Bihar kosa, ankizy iray no namoy ny ainy rehefa avy nihinana sakafo atoandro tao an-tsekoly. Ary taminà loza hafa tao Dhule ao amin'ny distrikan'i Maharashtra, ankizy 31 no naiditra hopitaly rehefa avy nisakafo atoandro .
Ankizy mpianatra ao amin'ny sekoly Hindi iray tohanan'ny governemanta ara-bola ao Mumbai, India, 2012. Sary avy amin'ny mpanoratra.
Ny fandaharan'asa famahananana sakafo atoandro, nanomboka tamin'ny taona 1960 no tantara taloha indrindra tao India izay natao handrisihana ireo saranga sahirana mba handefa ny zanany any an-tsekoly. Ankoatra ny fampianarana, natao handrisihana mba hisoratra anarana any an-tsekoly ny fanomezana sakafo isaky ny mpianatra. Na dia izany aza, hatramin'ny niandohan'ny fandaharan'asa famahanana sakafo, niseho hatrany ny vaovao fanodikodinan-tsakafo natokana ho an'ny ankizy. Nilaza ohatra ny vaovao tamin'ny taona 2006 fa tsy nahazo ny anjara sakafony nandritra ny 18 volana ireo ankizy tao amin'ny sekoly ambaratonga fototra tao Darjeeling .
Araka ny efa nampoizina, nanjary nivadika resaka politika ny olana. Nanambara ny antoko politikan'ny fitondrana fa teti-dratsy nataon'ny mpanohitra hamelezana azy izany. Voalaza fa mpanao politika malaza ny vadin'ilay talen-tsekoly izay tompon'andraikitra tamin'ny famatsiana ireo sakafo any an-tsekoly.
Nahatezitra ny maro tao amin'ny habaka tambajotra sosialy ny tsirambina ataon'ny governemanta.
Mpisera Twitter monina ao India, Vikram Singh (@cynicalvs) nanoratra hoe:
@cynicalvs: Nahoana no matin'ny fihinanana sakafo atoandro ireo ankizy? Kanefa sakafo io. Misy olona tokony hotsaraina noho ny famonoan'olona. #chappra
Raha vao tonga teny amin'ny hopitaly ireo mpanao gazety mba hitatitra ny zava-misy, ratsy dia ratsy ny fandraisana an-tanana ireo ankizy marary. Nisy lahatsary nandeha mivantana nampiseho ireo ankizy hany velona mivangongo ao anatinà birao iray ary omena ranon-tsira.
Nahita i Milind Khandekar, lehiben'ny famoahan-dahatsoratra ao amin'ny ABP News (@milindkhandekar) fa:
@milindkhandekar: Mampiseho ireo ray aman-dreny mampiasa taratasy hikopahana ireo zanany niditra hopitaly ity lahatsary avy amin'i Chappra ity. Modelim-pandrosoana ao Bihar ve izao?
Nitarika avy hatrany ireo mpiserasera ao amin'ny media sosialy hiady hevitra momba ny tsirambina sy avonavona ataon'ny mpanao politika Indiana ity loza ity.
Abhijit Majumder, mpanao gazety avy ao Delhi (@abhijitmajumder), nisioka hoe:
@abhijitmajumder: Tsy manavakavaka ny mpanao politikanay. 2G ho an'ny mpanankarena na NREGA, sakafo atoandro ho an'ny mahantra indrindra, norobàna tsy misy anavahana avokoa ny sakafo rehetra. # Chhapra
Mpianatra ao amin'ny sekoly Hindi manodidina an'i Mumbai misakafo ao an-tokontany tsy misy seza sy lovia. Mpianatra hafa kosa mampiseho boaty tiffin ary mitaraina momba ny haratsin'ny sakafo. 2012. Sary avy amin'ny mpanoratra.
Niresaka sompirana momba ny fisolokiana vao haingana tahaka ny 2G sy ny NREGA, izay nandeha amina miliara dolara ary nahatonga ahiahy teo amin'ny fomba fiasan'ny governemanta Indiana i Majumder.
Mpanao gazety hafa monina ao Delhi, Raghavendra Verma (@r_verma), naneho hevitra momba ny fihetsika ankapoben'ireo mpampianatra ao amin'ny sekoly tantanin'ny fanjakana:
@r_verma: Manome sakafo atoandro ho an'ny mpianatra ireo mpampianatra tahaka ny hoe manao asa soa izy ireo. #Chhapra
Fazal Abbas (@fazlabas), mpisera Twitter monina ao Mumbai, nizara vinavina tantara mikasika ny adihevitra resahina:
@fazlabas: Mitovy amin'ny filohantsika voalohany ihany i Chhapra, niverina 50 taona taty aoriana ny Dr. Rajendra Prasad. Matin'ny fampianarana ny ankizy.
Kiran Bedi (@thekiranbedi), manam-boninahitra taloha avy ao Delhi fantatra amin'ny asa soa sy ady amin'ny kolikoly ataony ao India, nisioka hoe:
@thekiranbedi: Miteraka fanafintohinana sy tsy ara-pahadiovana ny sakafo atoandro any amin'ny toerana maro. Mandany fotoana mahandro sakafo ihany koa ireo mpampianatra! Maninona raha voankazo sy voanio no omena?
Manamafy ny fitantaran'i Bedi ity porofon-tsary eto ambony ity. Tsy i Bihar, sekoly tantanin'ny governemanta manerana an'i India ihany no mety ahitana tantara goavana momba ny tsirambina sy ny fitantanana ratsy hotantaraina. Raha mikasika ity raharaha ity, mailaka ery ny governemanta Indiana nanambara onitra 2 lakhs (eo amin'ny 3,367 dolara Amerikana) ho an'ny fianakaviana niharam-pahoriana.
Efa an-dalana ny fikarohana ny antony marina nahatonga ny fanapoizinana ny sakafo – raha afohezina, araka ny fomban'ny eny amin'ny biraom-panjakana mahazatra [ie: mbola ho ela vao hiravona]. Hiaiky ny helony ve ireo tompon'andraikitra?